Namorona Ny Tafika Mpirotsaka An-tsitrapo Ao Amin’ny Aterineto Ny Nasiônalista Shinoa “Papango”, Hanohitra ireo “Hery Fahavalo” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2015 5:27 GMT
Sarin'ny mombamomba ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo an'i Dai Xu ao amin'ny Aterineto.
Efa fahita ny fisehoan-javatra: vondronà mpaneho hevitra izay manitatra ny sehatry ny hevi-bahoaka amin'ny korontana ao amin'ny Aterineto any Shina. Amin'ny fanompàna ireo olona sy fanovàna ny zava-misy mba hahatonga hevitra mahatezitra bebe kokoa, nanamboatra toerana hiadiana mihitsy ireo vondrona ireo, manosika ireo mpisera amin'ny Aterineto hifanditra ety anaty Aterineto, na hikarakara korontana ivelan'ny Aterineto.
Matetika no miseho ho toy ny “mpirotsaka an-tsitrapon'ny fivoaran'ny tanora ao amin'ny aterineto” ireo karazana mpaneho hevitra amin'ny Aterineto ireo, tohanan'ireo Liginà Tanora Kaominista Afovoany miaraka amin'ny governemanta, ny Antoko 50 Cent (Wumaodang) na ireo mpanohana mahaleotena ny governemanta, fantatra amin'ny hoe “ziganwu.”
Ao amin'ny Weibo, tsy mametraka zavatra firy mombamomba azy ireo mpirotsaka an-tsitrapon'ny fivoarana ao amin'ny Aterineto sy ny wumaodang —sary sy anarana sahala amin'ny an'ireo mpisera amin'ny Aterineto tsotra no apetrany eo.
Fa misy hery iray vaovao miforona, ny “tafika mpirotsaka an-tsitrapo Shinoa amin'ny Aterineto” tantànan'ireo mpikambana avy amin'ny vondrona nasiônalista elatra havanana. Ireo mpanaraka ny kolonely zokiny Dai Xu izay nandresy lahatra ny hanaovana tafika miahy tea ho fanafahana handrodanana ireo hery fahavalo avy any ivelany ao amin'ny Aterineto no nanangana ilay tafika mpirotsaka an-tsitrapo, izay nalamina toy ny fomban'ny sampan'ny tafika. Samy manana ny kaontiny amin'ny media sosialy avy ny sampana tafika tsirairay, izay misy ireo sainam-pirenena jaky manjelatra sy ireo teny faneva fanentanana eny amin'ireo pejin'ny mombamomba azy. Manana ny hira fanevny manokana mihitsy aza ilay tafika.
Ity tafika mpirotsaka an-tsitrapo ity dia mametraka ny tenany ho hery miaro ny tombontsoam-pirenena sy ny nofin'i Shina, fotokevitra noforonon'i Xi Jinping, filohan'i Shina ny taona 2012. Milaza izao ny fanambaràna ny asa iandraiketany:
[Ny asa iandraiketan'ny tafika Shinoa mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny Aterineto] Ny hanohana ny filoha Xi hanatanteraka ny nofin'i Shina no adidy sy tanjon'ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Aterineto. Miaro ny tombotsoam-pirenena, mampiroborobo ny nasionalisma, mampiray ny hery tsara, mandrodana ny tsanganana fahadimy [mpitsikilo sy mpamadika an'ireo hery mpanjakazaka]. Ankehitriny, misy sampana maro ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Aterineto: ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny Aterineto Dai Xu sy ireo sampany, ny sampana mpijery ato aoriana, ny sampana mpanafika Hua Xia, ny sampana Mpisava làlana, tafika mpirotsaka an-tsitrapo vaovao Triangle Hill [Triangle Hill, toerana nisy ady lehibe nandritra ny adin'ny Koreana tamin'ireo miaramila Amerikana ny taona 1950].
Dai, kolonely misotro ronono sy mpaneho hevitra ao amin'ilay gazety natao ho an'ny sarambabem-bahoaka (tabloid) Global Times tantanan'ny fanjakana, fantatra amin'ny fomba fijeriny avy lavitra ny politika ivelany sy ara-tafiky ny Shinoa.
Tamin'ny tafatafa ny volana Jona, nampaneno lakolosy izy ny amin'ny “hery ratsin'ny tandrefana” mitsofoka sy manova ny fotokevitra Shinoa hanaraka ny an'ny tandrefana, araka ny voalazan'ny ampahany manaraka izao:
Tarihan'ireo foiben-toerany, nisy sasany tamin'ireo “sampana statejika Amerikana nalefa mialoha” niditra tany amin'ireo tranon-kevitra Shinoa ka mandiso ny famolavolàna ny paikady Shinoa, ary manodina ny firoboroboana ara-toekarena ao Shina ho lasa miankin-doha amin'ireo teknolojia efa taraiky, mba hamonoana ny fanambin'i Shina tsy hiankin-doha amin'ny sehatry ny teknolojia avo lentan'ny Amerikana. Manana tanjona ny hanao an'i Shina ho andevon'ny toekaren'ny tandrefana izy ireo [sampana statejika]. Misy ireo [sampana statejika sasany] niditra an-tsokosoko tany amin'ireo kolejy sy ireo ivon-toerana fikarohana, mody hoe manohana ilay fikarohana, mba hanasa atidoha ireo manampahaizana izay manohana ny fijery “tsy mankasitraka ny kaominisma sy manohitra an'i Shina”. Mifantoka amin'ny sehatry ny lalàna, politika ary tantara ireo fidikidirany. Mba hamitahana ny vahoaka, mampiasa ny renivola vahiny izy ireo mba hanarahana maso ireo vavahadin'ny Aterineto momba ny serasera ara-barotra, ary manaparitaka amin'ny fampiasàna ny media vaovao sy ny Aterineto ny hevi-diso tsy ara-dalàna momba ny fomba fisainana nalaza ara- tantara amin'ny fandavana ny fenitra napetraky ny fiarahamonina sy fametrahana fanontaniana momba ny zavatra rehetra. Misy aza ireo [sampana statejika] sasany nahavitra niditra tamin'ireo media fototra Shinoa sy ireo masoivohon'ny governemanta, ary nanao asa ratsy nanimba tanteraka ireo tombotsoan'ny Shina sy nanome tombony ny tany tandrefana.
Ny taona 2013, naneho ny fanohanany ny fiverenan'i Dai i Hu Xijing, tonian-dahatsoratry ny Global Times sady olona malaza amin'ny maha nasiônalista azy :
Papango malaza tao anatin'ny miaramila Shinoa manam-pahaizana i Dai. Matetika aho tsy mitovy hevitra amin'ny heviny, fa mahatsapa aho fa tena mila tanteraka ny “papango” toy ireny ny sehatry ny raharaham-pirenen'i Shina.
Ny Fiakaran'ny Miaramila Mpirotsaka An-tsitrapo
Na teo aza ny zava-misy hoe matetika miantso any amin'ny fanohanana mazava sy arahan'asa mendrika hametrahana fitokisana ny tsikombakomban'i Dai, mamaly ny fitomboan'ny nasiônalisma hatrany ny fandresen-dahatra ara-politika ataony, ary efa manomboka maka endrika ho tafika ao amin'ny Aterineto, mpirotsaka an-tsitrapo sy manana ny fitantànany samirery.
Ny volana Jolay lasa teo i Dai nanazava tao amin'ny lahatsoratra iray ny antony anohanany ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Aterineto:
Amin'izao, mampiasa ny Aterineto sy ireo tombontsoa azo avy aminy ireo firenena tandrefana sasany mba hihantsiana fanovàna loko, amin'ny fametrahana korontana manerana ny tany. Nanamafy i Xi fa tena zava-dehibe tokoa ny ady ho an'ny fotokevitra… Nandritra ny ady nanoherana ny Japoney, “nanatanteraka fitsikilovana henjana be” ny Antoko Kaoministan'i Shina, mba hanamafisana ny mandatehezana nitambatra tao anatin'ny ady. [Ankehitriny] averinay ny herimpo sy ny fitiavan-tanindrazana, amin'ny fitarihana ny fanahin'ireo tafika mpirotsaka an-tsitrapo hitety ny fotoana sy toerana rehetra ary mamelona azy io ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Aterineto ankehitriny.
Ny tena izy, ny Tafika Mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny Aterineto an'i Dai Xu, izay ny lehibe indrindra amin'ny Tafika mMpirotsaka An-tsitrapo ety anaty aterineto, no voalohany namorona ilay vondrona. Nanazava ny fomba niforonan'io tao amin'ny lahatsoratra Weibo ireo mpikambana ao amin'ny sampana Tafika Mpirotsaka An-tsitrapo amin'ny tafik'i Dai:
Mba hiarovana ny “Triangle Hill ao amin'ny Aterineto” , mandrisika ny famoronana ny “tafika mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Aterineto” i Dai, izay natao ho an'ireo olom-pirenena tia tanindrazana, izay nahazo aingam-panahy tamin'i Dai sy ny fizakantena, mba hanao ady ao amin'ny Aterineto hanoherana ireo hery ratsy. Tsy noforonin'i Dai akory ilay tafika, fa kosa nomena ny anarany mba hanehoanay ny fanajanay. Tsy misy endrika fivoriana manokana [ataonay], ny hanambatra ny rehetra sy hiantso ny fitiavan-tanindrazana bebe kokoa mba hiarovana ireo tombontsoam-pirenena no tanjonay.
Ady ao amin'ny Aterineto
Matetika no lasa kinendrin'ireo fanafihan'ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo ireo olo-malaza izay maneho ny heviny ao amin'ny Weibo, sehatra lehibe indrindra any Shina mitovy amin'i Twitter.
Vao haingana i Ren Zhiqiang, lehibe amin'ny resaka fandraharahàna trano sy mpikambana amin'ny Antoko Kaominitsa, nopetahana anarana hoe “tafondro goavana,” no lasibatr'ilay tafika. Ny volana Septambra lasa teo, nanaratsy ny filofosana ny foto-kevitra Kaominisma amin'ny Ligin'ny Tanora Kaominitsa i Ren, tamin'ny fampahatsiahivana ireo fijaliany nandritra ny Fanovàna ara-Kolontsaina.
Andro vitsy taty aoriana, nisy lahatsoratr'i Yi Guoming, nitondra ny lohateny hoe “Mahatsapa ny Fita-bitron'i Ren Zhiqiang”, niampanga an'i Ren ho manaratsy ny fotokevitra kaominisma ary miaro ny demôkrasia tandrefana. Nanomboka nanao fanafihana maro an'i Ren ilay tafika mpirotsaka an-tsitrapo, tamin'ny fizaràna ilay lahatsoratra tao amin'ny Aterineto ary namerimberina ny fomba fijerin'ilay mpanoratra.
Mihoa-pefy tsy nanaraka ny fitsipika ofisialin'ny governemanta sy ny Antoko Koaminista, izay nanamafy ny maha zava-dehibe ny fomba fitondrantenana amin'ny maha-olona nandia fianarana ao amin'ny Aterineto ihany koa ilay vondrona. Miaro ireo sarisary fampiasa amin'ny Aterineto mihitsy aza ilay tafika mpirotsaka an-tsitrapo, toa an'i Hou Jusen, ilay mpikambana malaza ratsin'ny “mpirotsaka an-tsitrapon'ny fivoarana ao amin'ny Aterineto,” izay nanangona ady maro tety anaty aterineto sy nirotsaka taminà ady teny an-dàlana tamin'ny anaran'ny fitiavan-tanindrazana:
Tsy maintsy matanjaka tokoa, ny fanjakàna, izay manana mpiasam-panjakàna sahala amin'ny tale Dai, mpianatra tanora toa an'i Hou Jusen, ary tafika mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny Aterineto miaro ny “Triangle Hill” amin'ny Aterineto. Andao tsiahivina hatrany ireo holatry ny firenena sy ny tolona hanànana firenena matanjaka kokoa!
Miaraka amin'ireo fanambaràna tahàka ireny, manosika ny fitiavan-tanindrazana ao amin'ny Aterineto ireo tafika mpirotsaka an-tsitrapo — amin'ny fanovàna ny hevitra, fihoaram-pefin'ny mpisera amin'ny Aterineto ka hatramin'ny fanohanana herisetra mihitsy aza, ary tsy mijery ny ankamaroan'ireo lalàna ka manao io ho sahala amin'ny toerana milamina azo iheren'ny jiolahy sy jiolahimboto.
Misalasala momba ny maha ara-dalàna ny tafika mpirotsaka an-tsitrapo, ny mpampiasa Weibo iray, ao amin'ireo fanehoan-kevitra:
Ilay antsoina hoe fitiavan-tanindrazana Dai sy ireo nilaza ho jiolahim-boto an-tserasera nilaza dia natao hisotasota sy hanompa ny olona izay nanakiana ny governemanta noho ny tsy rariny sy ny kolikoly misy amin'izao fotoana izao. Ireo jiolahimboto ireo, izay tsy nanao na inona na inona ata-tsy ny midera ny rafitra [ny fanjakana], no tena mpamadika.
23 ora izayJapana